ရန်ပွဲကြယ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ရန်ပွဲကြယ်
ရန်ပွဲကြယ် APK ကို
- ကျောက်မျက်ရတနာဆုပ် (3v3): ရေးအဖွဲ့တက်ထွက်-strategize ဟာပြိုင်ဘက်အသင်းမှ။ စုဆောင်းကိုင် 10 ကျောက်မျက်အနိုင်ရပေမယ့် fragged နှင့်သင့်ကျောက်မျက်ဆုံးရှုံးရ။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! ရန်ပွဲကြယ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင်ရန်ပွဲကြယ် play သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ရမည်။
နယူး Brawler: tick!
- 4,000 ဖလားမှာဆုဖလားလမ်းမကြီးအတွက်အခမဲ့ရနိုင်သော!
- ပေါက်ကွဲစွမ်းအင် - tick အနိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအင်၏သတ္တုဘောလုံးကိုပါ!
- သူမိုင်း lobs, သူ၏စူပါသူ၏ဦးခေါင်းကို detach စေသည်, တစ်ပစ်မှတ်ကိုရှာခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲ!
- စတားအင်အားကြီးနိုင်ငံများ: တစ်ဦးချင်းစီ Brawler အသစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စတားအင်အားကြီးနိုင်ငံများစုဆောင်း!
- စတားထား: နယူးငွေကြေးဂိမ်းအတွက်တိုးတက်ဘို့, အသစ်ကဝယ်ယူဆုလာဘ်ထည့်သွင်း
100.87 ကို MB
ရန်ပွဲ Stats ကတော့အဘို့အ ...